९३ वर्षीय सर्जनको यस्तो जोस, पढाउँछन् अझै मेडिकलका विद्यार्थी - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ अन्य ∕ ९३ वर्षीय सर्जनको यस्तो जोस, पढाउँछन् अझै मेडिकलका विद्यार्थी
९३ वर्षीय सर्जनको यस्तो जोस, पढाउँछन् अझै मेडिकलका विद्यार्थी
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ भदौ ४ गते, १४:३६ मा प्रकाशित
उनले भर्खरै ९३ औं वसन्त पार गरे । डाँडामाथिको घामको अवस्थामा पुगेका उनमा युवाको जस्तै जोस र जाँगर छ । ब्यागमा ल्यापटप बोक्छन् र नियमितजसो मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई फुल टाइम पढाउँछन् । झट्ट सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर, बेलायतका सर्जन प्राध्यापक डाक्टर हारोल्ड इलिसीको पछिल्लो दैनिकी यस्तै छ । उनी ७१ वर्षअघि पनि बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) मा काम गर्थे । अहिले पुनः सोही अस्पतालमा जोडिएका छन् । अर्को अस्पतालमा पनि पार्ट टाइम पढाउँछन् । शल्यक्रियाका अतिरिक्त पढाउनु उनको सानैदेखिको सौख थियो । त्यही सौखमा उनी रमाएका छन् ।
प्राध्यापक हारोल्ड सम्भवतः बेलायतकै सबैभन्दा लामो समय सेवा गर्ने मेडिकल क्षेत्रका एक नक्षत्र हुन् । देशका प्रायः सबै अस्पतालमा काम गरिसकेका छन् उनले । अधिकांश अस्पतालमा सर्जनको भूमिकामा रहे । सम्पूर्ण जीवन मेडिकल क्षेत्रमा सर्मपण गरेका उनको अन्तिम श्वास लिने बेलासम्म यही क्षेत्रमा रहने प्रण छ । बुढ्यौलीले गाँज्दै गर्दा अस्पताल धाउनुको कारणबारे उनी ठट्यौली पारामा भन्छन्, ‘मलाई अझै पनि पत्नीले दिउँसो घर बस्नै दिन्नन ।’
पढाउनुबाहेक लेखनमा पनि उनको रुची छ । उनले दर्जनौं पुस्तक लेखेका छन । केही वर्षअगाडि उनले मेडिकल विद्यार्थीका लागि एनोटोमीबारे एउटा पुस्तक समेत लेखेका थिए । तर, उनलाई अध्यापनमै सौख छ । भन्छन्, ‘मेडिसिन पढाउनु निकै व्यवहारिक पक्ष हो ।’
पहिले र अहिलेको शल्यक्रिया प्रक्रिया निकै परिवर्तन भएको उनको अनुभव छ । त्यसको श्रेय आधुनिक उपकरण र वैज्ञानिक उपलब्धिलाई मान्छन् उनी । ‘अहिले शल्यक्रियामा पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भएको छ ,’ उनी भन्छन्, ‘मेडिकल क्षेत्रमा भएको परिवर्तन र उपलब्धि साँच्ची नै अविश्वसनीय छ । ’
मानिसहरु अहिले स्वास्थ्यप्रति बढी सचेत रहने गरेको उनको अनुभव छ । ‘तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने म २५ वर्ष अगाडि मर्नुपर्ने हो,’ उनी थप्छन्, ‘तर ७५ वर्षका मानिस अहिले पनि म्याराथुनमा सहभागी हुन्छन् । ’
प्राध्यापक डा. हारोल्डले सन् १९४८ को जुलाईमा डाक्टरको योग्यता पाएका थिए । लगत्तै उनी एनएचसमा सर्जनको तालिम लिए । सन् १९८९ सम्म वेस्ट मिनिस्टर हस्पिटलमा सर्जन र प्राध्यापकको रुपमा काम गरे । त्यसपछि क्याम्ब्रिज युनिर्भसिटीमा एनोटोमी पढाउन थाले । अहिले पनि उनी मध्य लन्डनको गाएज हस्पिटलमा पार्ट टाइम पढाउछन् ।
पहिला र अहिलेको शल्यक्रिया पक्रिया निकै परिवर्तन भएको उनको अनुभव छ । त्यसको श्रेय आधुनिक उपकरण र वैज्ञानिक उपलब्धिलाई मान्छन् उनी ।
पोल्यान्ड र यहुदी मूलका डा. हेराल्डको जन्म १९२६ मा भएको हो । उनका बाबु नाई थिए । सेन्ट अलाभस ग्रामर स्कुलबाट स्नातक गरेपछि उनी अक्सफोर्डस्थित ¥याडक्लिफ इनफरमेरीमा काम गरे ।
पढाउनुबाहेक लेखनमा पनि उनको रुची छ । उनले दर्जनौं पुस्तक लेखेका छन् । केही वर्षअगाडि उनले मेडिकल विद्यार्थीका लागि एनोटोमीबारे एउटा पुस्तक समेत लेखेका थिए । तर, उनलाई अध्यापनमै सौख छ । भन्छन्, ‘मेडिसिन पढाउनु निकै व्यवहारिक पक्ष हो ।’ एनोटोमीलाई पुस्तकभन्दा पनि व्यवहारिक रुपमा अध्यापन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘एनोटोमी पढाउन मानव शरीर उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनी थप्छन् । उनको यसै साता पछिल्लो पुस्तक ‘स्टोरिज फ्रम दी अपरेटिङ थियटर एन्ड अदर एस्से’ यसै साता प्रकाशित भएको छ । मेडिकल क्षेत्रमा भएको आधुनिक उपलब्धिबारे पुस्तक केन्द्रित छ । अहिलेका विद्यार्थीलाई उनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन् । भन्छन्, ‘म अहिलेका मेडिकल विद्यार्लीलाई प्रशंसा गर्छु, उनीहरु निकै मेहनेती छन् ।’